१० रुपैया प्रतिइकाईमा दुई अर्ब बढीको म्युचुअल फण्ड बजारमा, कसरी गर्ने खरिद ? « Arthatantra.com : A Complete Economic News Portal From Nepal.
१० रुपैया प्रतिइकाईमा दुई अर्ब बढीको म्युचुअल फण्ड बजारमा, कसरी गर्ने खरिद ?
काठमाडौँ । पछिल्लो समय पुँजि बजारमा म्युचुअल फण्डको कारोबार उल्लेख्य हुने गरेको छ । विभिन्न वित्तिय संस्थाले विभिन्न नाममा फण्ड जारी गर्न थालेका छन् । नेपालको पुँजी बजारमा नयाँ नयाँ अवसर तथा लगानीका स्रोतको पहिचान हुँदै गरेको सन्दर्भमा म्युचुअल फण्डमा एकपछि अर्को गर्दै आकर्षण बढ्दै गएको छ ।
उक्त म्युचुअल फण्डको वार्षिक प्रतिफल पहिलो वर्ष १५.५७ तथा सातौ वर्षमा १६.१३ प्रतिशत दिने लक्ष्य लिएको कम्पनीले जनाएको छ ।